Mogadishu Journal » Maamulka Gobolka Banaadir oo ku amray hay’adaha Samafalka in ay is diiwaan-geliyaan
Mjournal :-Maamulka gobolka Banaadir ayaa ugu baaqay hay’adaha samafalka ee ka howlgala gobolka Banaadir inay la soo xiriiraan maamulka gobolka si loo ogaado howlaha ay qabanayaan.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir ay talaabo ka qaadi doonaan Hay’addaha Samafalka ee sida Sharci darada ah ugu shaqeysta Muqdisho.
Gudoomiye Yariisow Waxaa uu tilmaamay in Muqdisho ay jooggaan hay’addo badan oo shaqooyin kala duwan qabta kuwaasoo aysan la socon maamulka gobolka Banaadir.
Maamulka gobolka Banaadir ayuu sheegay in ay la shaqeyn doonaan Hay’addaha diwaangashan ee Muqdisho ka howlgalla.
Magaalada Muqdisho ee caasimada dalka ayaa waxaa xarumo ku leh boqolaal hay’ado ah oo sheegta inay qabtaan howlo samafal iyagoo howlaha ay qabanayaan aysan jirin cid ka warqabta marka laga reebo hay’ado ay qandaraasyo ka soo qaataan.